juxa | www.saaxil.tk
Juxa iyo Sheekooyinkisii.
wixii inta dheer cinwaankan nagala soo xidhiidh
waxa layiri xiligaa Juxaa jiray baa maalin maalmaha ka mida ah loo dhiibay dameero oo la yiri soo warabi waxay ahayeen 10 dameeraad markuu celi kii ka soo noqday oo uu ada marayey buu is yir dameeri hii tiri isagoo saran mid ka mida dameerihii buu tiradii bilaabay makaa kii uusara wa ailabay oo tiradi kuam darin markuu kii ilabay waxa u soo baxay 9 dameeraaad waa uu yabay oo ka degay dameerku sara hadan dibu ayaa tiradii ugu ceshay waxa us soo baxay 10 dameera ah uu yabay wuxu yir markaan dameerka u baxan dameer baan la wayaye markaan ku geeyna dameer kii baa so noqnaya oo tiradi wa dhamanaysaa markaa wuxuu go aan saday inu uu lugihisa isticmaalo ilaa intuu guri gii ka ganayo iyagoo dhan oo xuubdo tiradii saka loo sii dhibay oo ahayd 10 dameerad marku gurigii tegay oo xereye buu dadkii u sheegay shekadi ku dhacday cidn waxba kama so qadin oo walxa yiri war waa Juxee inagdaya marka habeen badh kii bu xasuutay in uu ka ilabayey tirada damrkuu sara oo marku damrka ubaxan aan ku tirnayan damarka uu ku joogo marka shekada waxa ku so baxday maah maah carabi ah oo ahayd caqlul cabiidi manfasiqa saaca layal oomacnaheedu yahay sidan u malaynayo doqonka caqliguuso habeenkii bu kal miirmaa ama sifiican u shaqeeyaa wataa sheekadi Juxaa o aha nin carb ah
weli waxan ku jiraa Juxaa
Juxa iyo damiirkiisi.
Juxa ayaa dameer uu laha suuqa keenay sii uu u iibiyo nin doonayay in uu gato dameerka ayaa qabtay seyntii Dameerka, dabadeetoayuu haraati ku jiiday, haddana wuxuu fiiriyay ilkihiisa makaasuu dameerkii qaniinay ninkoo xanuunsanaya ayaa yiri juxow cidna dameerkan kaama gadaneyso, juxa ayaa u jawaabay oo yiri in ay cidi iga gadato uma keenin suuqa, ee markii horeba waxaan u keenay in leyla arko dhibka uu igu hayo aniga!!
weli waa Juxaa sheekadiisii
Juxa iyo ninkii Aqliga Badnaa
Beri baa waxa ajiray nin kaa Juxaa la yiraahdo maali mala maha ka mid ah ayaa juxaa wuxuu aaday beeraha wuxuuna ka doonay ood tan guriha badiyan alagu dhiso ka bacdi wuxu tegay geed dheer wuu u baxay wuxuuna is yiri oodi ka go wuxu ku fadhiistay laan ka mid ah laamihii uu goynayey ka bacdi nin meesh amaraya ba yiri war miyaad waalan tahay laanta aad ku fadhido ha gooyn waad soo dhacaysaaye ka bacdi juxaa dheg umaa dhigin nin kii nin kiina waa is ka dhaafay cabaar ka bacdi juxaa dhukuu ku soo dhacay ilayn laantii uu ku fadhiyey buu gooyaye ka bacdi nin kii wax u sheegayey oo meel halkaas ah sii socda buu ka daba caday oo yir war bal kaalay nin wax walba og baad tahay nin kaagan ii sheegay hadan laanta gooyo in aan so dhacayo nin kii waa yaabay markuu juxaa sidaa ku yiri juxa wuxuu yir war wala waxaad ii sheegtaa maalin taan dhimanayo waadigan mark kii hore iisheegay in aan ka soo dhacayo laanta hadan gooyee nin kii in tuu yabay bu gartay in uu nin kan nacsa yahay markaas buu yiri waxaad dhimanaysaa marka dameer kaagu qayliyo juxaa wuxuu maalin tii oo dhan firinayay dameer kiisa afkiisi dameera waa dameer marku dameero arko buu qayliya cabar ka bacdi dameerkii baa arkay dameero kale oo qaylo ugu qabtay juxaa waa ti nin kii ku yir marka dameer kaagu qayliyo waad dhimanaysaa juxaa waa u ramaystay sheegadii nin ku ku yiri oo wuxuu qatay mara cad wuxuuna aaday xabaalaha dadka lagu duugo isago isleh waad dhimanaysa wuxuu juxaa dhex seexda xaboolo magalada ka baxsan waxaa meeshi xabalah agtooda ahayd soo maray dad magalad aka lunsan oo wayaya waday u mari lahayeen waxa arkeen qof kaas xabalaha dhex jiifa waxay is yirahdeen qof kan waydiiya meel magalada loo maro waxay yirahdeen war qof kaan hurda meesh ama noo sheegi karytaa meel maglaadii naga xigto waa wada habawnaye markaas baa juxaa yiri markaan aduunka ku noola waxa loo mari jiray wadaa agtiin aah markaas bay yaabeen ioo yirahdeen nin kan miyuu walan yahay wuxuu k awada markaan aduunka ku noolaa waxay waydiiyiin wuxu kalmada u leeyahay juaxaa wuxu ragii u sheegay sheekadii oo dhan ka bacdi waxaa yirhadeen sida laguma dhintee ka kac meesha oo ina keen.
Waraabe iyo Dawaco.
Intuu yaabey ayuu ku yidhi, “Naa dawaco yaa geedka kugu xidh-xidhay?” Markaas ayey dawacadii tidhi, “Waxa igu xidhay adeerkay.” Waraabihii (Dhurwaa) ayaa hadana yidhi, “Oo muxuu kuu xidhay?” Dawacadii ayaa tidhi, “Adeerkay aad buu ii jicelyahay.” Wuxuu arkay in aan caato ahay markaa wuxuu ii qalay wan weyn oo aad u buuran. Dabkaasna wankaas ayaa lagu karin doonaa. Aniguna waan diidanahay in aan cuno wankaas buuran, waayo gaajo ima hayso oo maalmahan oo dhan ayaan hilib cunayey, oo waxaan ka cabsanayaa inaan calool xanuun ka qaado. Markii aan damcay in aan ka tagana, intuu i soo qabtay ayuu geedkan igu xidhay. Markaan hilibkii cuni kari waayeyna wuu i diley. Waraabihii ayaa intuu afka aad u kala qabtay illeen waa wax hilib iyo baruur jecele yidhi, “Ihi! ihi! ihi! aniga ayaa xariga kaa furaya ee aniga geedka igu xidh, si aan anigu u cuno hilibkaas adiguna uga nabad gasho.” Markii dadkii ku soo noqdeen meeshii dawacadu ku xidhnayd, si ay dabka ugu dhex tuuraan, waxay u yimaaddeen waraabe ku xidhan geedkii. Dadkii ayaa intey yaabeen yidhi, “War Waraabe meeday dawacadii?” Markaas ayuu waraabihii yidhi, “aniga ayaa xarigii ka furay oo way tagtay.”
Qiso Gaaban: Wiil Waal iyo Cali
Lugo Goroyo ma Horaaddaa mise waa Dambeeddo
Baribaa waxaa jiray boqor caan baxay oo Soomaaliyeed oo ka talin jiray degaanka Jigjiga caasimadda u tahay. Waxaa boqorkaa la odhan jiray Garaad Wiil Waal wuxuuna ahaa nin aragti soofaysan, aftahanimo, iyo hogaamin aad u heer sarraysana Alle weyne ku manaysatay. Wuxuu dagaal galaa-bixin jiray niman Galla ah oo uu dhul badan ka furtay. Wuxuu ahaa nin weedhiisu ka socoto degaanka u dhexeeya Herar iyo Jigjiga iyo dhulalka dariska la ah. Colaad iyo nabadgelyaba wuxuu ahaa hormuud Soomaaliyi ku dhaarato gabyaa culusna ah. Saldano taam ah iyo tol aad u tanaaday oo xoog badan markii uu isku hubsaday ayuu is cajabiyey oo wuxuu isku qanciyey inaan Bartire nin la aragti ah ama kusoo dhaw ku jirin.
Sidoo kale waxaa jiray wiil dhalin yar oo qeyrada Garaadku ka dhashay ahaa Ilaahayna dadka wax walba uma siminee ku manaystay bidhaan, hadal macaan, aftahanimo, iyo garasho heer sare ah. Cali ayuu ahaa magaciisu. Wuxuu Cali caashuqay haweenay ka mid ahayd haweenkii Garaadka oo uu wacad ku maray inuu wax walba oo aan dhiig-sokeeye ahayn oo ay ku qaadataba mar guri haweenaydaasi xaas ka tahay yagleelo. In muddo ah wuxuu ku taamo siddii dabin mar haweenaydaa uu kula kulmo uu qooli lahaaba, habeenkii dambe ayuu ku guulaystay inuu la kaliyeysto oo haasaawe aan kala go’ lahayn iyo ‘hadal beenta ka fiican runna raad ku lahayn’ la qaadaa dhigay.
Mar saddexaad waxaa jirtay xaaska Garaadka ee Cali jeclaaday oo ahayd haweenay aragti fog Garaad Wiil Waalna u ahayd dhidib adag, mar walba halkii uu goldaloolo ka yeelan karaba u tilmaanta, xasarad walbana u marta siddii saygeedu ugu nagaan lahaa saldanada Bartire islaweyni iyo qab ragna uusan sabab u noqonin burburka boqortooyadan balaadhan. Waxaa u muuqatay muhiimadda ay boqortooyadu u leedahay tolkeed oo colaad af-dhiige ah hareeraysay iyo in hogaamiye sida odaygeeda adag aysan ka maarmin. Sida aad sheekadaba ka dheegan doonto waxay ahayd gabadh aan ragga waxba u ogayn dhinac walba oo aad ka eegto kuna haboonayd inay Garaad Wiil Waal u dhaxdo.
Inkasta oo ay garashada qofka Soomaaliyeed ku adagtahay in shaqsi kale udub dhexaad u noqdo sheeko Garaadka magaciisu ka dhex yeedhay haddana waxaa xaqiiqo ah inay lama huraan tahay in Cali lagu hormaro si qodbaqaadka sheekadu u hagaago.
War miyaadan ogeyn inaan Garaadka xaaskiisii ahay oo miyaadan naftaada uun u baqaynin wax walba oo kale haddii aad xeerin weydo? Miyaadan wiilkaa yar ee xariirta ah ahayn oo dumar taad doontaba ka heli karin, maxaad ku doontay haweenay nin kale u dhaxday? Miyaan gabdho turaabtaa ahayn see wax yihiin? Hadalo aan sidaa iyo si u eg ku qiyaasay ayey gabbaad ka dhigatay oo ku bushisay damacii Cali. Nin meeli u caddahay meeli ka madow baa la yidhiyee Cali caqli celintaasi ma kaafiyin ee naa waxaa ka bax oo waan ku rabaaye anigaa arinta maarayn doona ee ha i diidin oo mar uun haye afkaaga ha ka yeedho ayuu soo celiyey?
Waxaad moodaa Cali inuu aad ugu dhagganaa fikir raggii xilligaa noolaa badankiisu qabay oo ku salaynaysnaa maahmaahdii isla iyagaasi sargooyeen ee ahayd “kas naageed oo kadaloob rag kaaga dambeeyey kaad ogayd ma aha.” Inkasta oo haweenayda rabitaankeedu caddaa, wax damac ah oo ay u haysay Calina uusan jirin, inay markaaba ku dalbato rag u dhaga nugul fulinta amarka Garaadka si ay abaalkii uga waraabiyaana awooday, si kale ayey maaganayd oo waxay rabtay darsi lama iloobaan ah in odaygeeda ka barto dhacdadan. Calina isagooy maahmaahdaa khaldan maddaxiisa ka guuxayso kartidiisa iyo hadal wanaagiisana ku kalsoon ayuu in badan abla-ableeyey siddii uu gabadha madaxeeda minjo oogu roggi lahaa.
Jilibka ayuuu xodxodasho u aastay. Wax la haasaawaba goortii in la kala hoydo loo hogbaday ayey waxay dacal go’ii uu hulaabnaa ka mid ah marisay asal si ammaarad barri loogu garto ay u noqoto. Ha la yaaabin in Cali go watay maxaa yeelay waqtigaas ragga Soomaaliyeed sidaa ayey u labisan jireen waxayna ahayd intaan macawisaha, saraawiisha iyo dhamaan dharka tolan geyiga Soomaaliyeed soo gaadhin. Cali isagoon wali dhooroofin sirta ay haweenaydu la damacsan tahay damaciisiina aan waxba uga hirgalin ayuu cadho la luuday. Wuxuuse naftiisa ku samirsiiyey inuu soo noqon doono isna oggolaysiin doono haweenayda.
Kalkii xigay ee Garaadku gurigiisii usoo hoyday ayey maamuus ka dib waxay afadii u sheegtay wixii dhacay oo dhan oo waxay tidhi nin kula caqli iyo hawaba ah ama noqon kara ayaa Bartire ku jira ee hooy qabka jooji. Ninbaa xalay oo dhan i shukaansanayey oo go’aan ku gaadhay inuu iga kaa qaado. Garaadkii ayaa cadho cirkaa maray oo si qaadasho waa iyo quudhsi ku jiro u yidhi waa kuma ninkaasi habeenkaa caawa ah ayaan unuunkiisa jarayaaye? Way u dajisay oo tidhi waxba inaad dagaalantid uma baahnid saa damac uu isagu i damco waa halkiisee, waxba iga qaadi mahayo aniguna doonimahayo isaga. Waxaanse kuu shegayaa calaamad aad ku garan doonto barrito marka tolku shirayo ee aad ragga Bartire isagu yeedho. Oo maxay tahay calaamadaasi ayuu weydiiyey? Afarta faraq ee go’iisa mid ka mid ah ayaan xalay aslay oo sidaa ayaad ku garan doontaa. Waayahay bal barito waxaan ku dhigo hala soo dhawro ayuu Garaadkii ku seexday.
Jahjahasho gaaban ka dib, wuxuu la kulmay wax mucjiso ku noqday. Rag aan ka yarayn 20 oo wuxuu arkay mid walba dhinaca asal ku leeyahay. Haweenaydiisii ayuu u cadhooday oo uu is yidhi maxay kaa lugoynaysaa! Gurigiisii markuu ku noqday ayuu warsaday waxa ay uga jeeday macluumaadkii ay siisay. Ninkii miyaadan arag ayey su’aashay, suuye ilaa 20 nin ayaa dacalka wada casaa ee waa see xaalku? Miyaanan kuu sheegin in nin kula garaad ah Bartire ku jiro ayey u celisay, qosol dheer dabadii.
Habeenkii xigay ayuu Cali soo noqday oo isku dayey bal inuu mar kale beer jileecsado haweenaydii isagoo hadalo macaan ka dib weydiiyey bal in mawqifkeedii wax iska badalay. Xaaraan caleeg iyo maya ayey isu raacisay inuusan meesha ku dibdhicinna way u sheegtay hase yeeshee waa layska haasaaway in muddo ah ileen midkood walba dan gooni ah ayuu wataaye. Markii uu dheelman doono ayey isagoon dareensanayn go’ii uu hagoognaa fiidda hoose in yar ka goysay si bal ay calaamad ugu noqoto Garaadka barritoole uguna aqoonsado Cali. Markii Garaadkii soo hoydayna warkii ayey ku taabatay oo tidhi waxaad raadisaa nin dhinac go’an. Garaadkiina waa yahay kan yar bixisaa wadaan u malayne ayuu ku laabriixday.
Cali haddii uu gurigiisii tagay wuxuu markiiba isha ku dhuftay go’iisii oo dhinac dulaaqan yahay wuxuuna gartay in haweenaydii mar kale sumadday. Isla habeenkii ayuu guuray oo uu si kali kali ah ula kulmay kontomeeyo nin oo uu ka dhaadhiciyey in Garaad Wiil Waal faray in dhammaan ragga barri kulmi doona mid walba go’iisa dacal ka gooyo. Waa arin yaab leh oo ay adag tahay inaan fahamno wuxuu uga jeedo laakiin waa Garaadkeenii waxaanan hubaa inuu wanaageena laabta ku hayo sidaa awgeed waa inaynu adeecnaa oo aan fulinaa amarkiisa ayuu xujaystay. Imisa jeer ayuu hadda ka hor arin fajac badan inoola yimid; tanina waa mid kuwii hore uun la mid ah, ayuu raaciyey. Nimankii way qanceen dhamaantoodna waxay ku dhaceen dabinkii Cali oo ay farqaha wada jarteen.
Shirkii markii la yimid subixii xigay wuxuu Garaadkii fiirfiiriyey nin go’ dhinac go’an wata hase ahaatee wuxuu arkay in ku dhawaad dhamaan ragga meesha jooga dacalku u wada jaran yahay. Talaa ku caddaatay oo in ninkii gedogedayn jiray ged cusub lasoo baxay ayuu xaqiiqsaday. Cawaysinkii ayuu xaaskiisii uga waramay in rag ilaa kontomeeya ah oo go’yaal dhinaca wada go’an wata goobta joogeen. Qosol ayey ka wareegtay mar labaadna ku abhisay inuusan is mahadinin oo aan islaweyni indha duubin maxaa yeelay rag caqli u saaxiib ah oo kale ayaa Bartire dhex bariisan haya.
Habeenkii saddexaad ayuu Cali mar kale isku dayey inuu haweenaydii beer laxawsado isagoo kolba sheeko cusub oo tii hore ka macaan u saaraya. Way uga dhaaratay inay waxba ka yeesho oo inna wax beer nugayl ah wuu kala kulmi waayey. Waxay damacday inay fashilkiisa si habboon uga shaqayso iyadoon rag isku dilin. Waxay haddaba la gashay sheekooyin kale duwan oo dhacdooyin hore sida dagaalo, taariikho, jacayl iwm isagu jira oo Bartire dhexdiisa ah. Habeenkii oo dhan ayey halkii fadhiyeen oo sheekaba sheekay keentaaye barigii kalana waa tiida gureen, siddii laba ruux oo waligood is yaqaanay in muddo ah aan is aragna u sheekaysteen iyadoo waliba aqalka daahu u xidhan yahay. Goor ay waa soodhawaadkii tahay ayuu Cali is arkay isagoo gunduruxsanaya oo wakhtigiiba illoobay markaa ayuu gurigiisii u dheelalaabay isagoo og in mar dhaw shirkii la isugu iman doono.
Waagii haddii uu baryey ayaa Garaadkii reerkiisii soo bariidiyey isagoo waliba hinfidh ka muuqdo; naa maxaa la sheegay? Nabad iyo naxariis. Oo xalay oo dhan aqalka daahu waa u dheeraaye see wax u jiraan? Waxba ma jiraanee, adigu saw ima aaminsanid aniga, ayey wediisay. Wanaag iyo intii dumar lagu raaco oo dhan ayuu ku yaqaanay wax uu u aamini waayana hadda ka hor kuma arag sidaa daraadeed waxaa u banaanaa oo kaliya inuu yidhaahdo haa oo waan ku aaminsanahay. Sidaa unbuuna yidhi. Haddaba haddaad i aaminsan tahay xalay oo dhan ninkii isagaa ahaa ayaa guriga joogay oo aanu sheekaysanaynay wax aan sheeko ahaynna nama dhax marin ayey u celisay. Markaad maanta geedka tagtaan waxaad ku garan doontaa sifo uusan xariifnimo kale oo uu ku badalo heli karin. Oo maxay tahay ayuu Garaadkii weydiiyey. Waxaad arki doontaa ileen waa nin xalay oo dhan soo jeedayee isagoo madaxa hoogaaminaya oo lulmoonaya. Waayahay bal aniga iyo isaga ha laysku eego maanta, ayuu yidhi.
Geedkii ayaa raggii isagu yimid. Cabbaar haddii uu fiirfiiriyey waxay markiiba ishiisu qabatay barbaar gooni ragga uga fadhiya oo aad moodo inuu xadraynayo. Waa sidee saaxiib, maxaad ugu lulmoonaysaa shirka dhexdiisa miyaadan xalay seexan ayuu Garaadkii weydiiyey? Talo faro ka haaday, ma is tidhi? Maya, kama haadin ee Cali nin garashadiisu gaashaan qaad tahay ayuu ahaaye markiiba wuxuu gartay ujeedada hoose ee su’aasha Wiil Waal si degani iyo kalsooniyi ku jirtana ugu jawaabay “maya Garaad ma lulmoonayo ee waxaan ka fakarayey lugo goroyo ma horaadaa mise waa dambeeddo.”
Garaadkii oo markiiba fahmay in ninku ninkii xariifka ahaa ee haweenaydiisa shukaansaday yahay ayaa qosol la dhacay. Waxaad tahay damac-badanihii isaga ahaa ee aan dhawrka jeer ku guuldaraystay inaan helo; saw ma aha adiga ninka xaaskayga hunguriyeeyey? ayuu Wiil Waal si cod dheer u yidhi. Guurtidii geedka fadhiday ayaa mar qudha dhinaca Cali wada eegtay iyagoo mindhaa u naxsan aayo xumada uu la kulmi doonana ka welwelsan. Waxay islahaayeen koley yarku ciqaab mudaye ciqaabtaasi ma dil qudh-gooye ahbaa mise waa dakhar in badan uu la dhul jiifi doono. Waxaa laabtooda ka guuxday su’aasha ah tolow inta ficil xumo badatay see Garaad Wiil Waal reerkiisa Cali u hawstay!
Cali isagoo raba inuu jawaabo oo is xujo bixiyo ayaa intuusan wali hadlin Garaadkii hadalkii mar kale qaatay oo soo jeediyey dhammaan guurtidii geedka fadhiday isagoo leh: Bartirow i maqal haddii tii Rabbi ii timaado waxaad hogaamiye ka dhigataan oo aad doorataan wiilkaa yar maxaa yeelay waa nin garasho culus oo aan iga dhicin dabagalkiisana aydaan ku khasaaraynin.
Intaasi hadday Garaadka afkiisa kasoo baxday qosol gariir male beenoobay uu sababay ayaa wajiyada guurtidii geedka fadhiday ka muuqday waxayna mar kale si hanbalyeyn u eg u wada eegeen dhinacii Cali geedka ka fadhiyey madaxana u yara gundhiyeen. Calina shaw is yar atooree oo inuu mansab hor leh oo uusan Bartire ku dhex lahayn ku yeelan doono niyadiisa u sheeg.
Wiilkii Caqliga ka Qaaday Boqorka.
Sheekadan waxa kamid tahay Sheekooyinkaan yaraantaydii xiisayan jiray. somalida markay joogeen somalia ma ayalahan TV laga dawado mada daalada caruuta waxaa caruuta somaliya mid magaalo iyo mid baadiyeba lagu mada dalin jiray sheekooyin ah khiyaali. sheekoyinkaas oolayska soo dhaxli jiray ninba nin ka kale u soo gud bin jiray illa iyo maanta soco ta. sheekadan caruutii aan wada ciyaari jiray baa iiga sheekaysa. illaa iyo maanta oo aan ahay nin wayan weli way ku jirtaa maskaxdayda maaha cartuun ana yartii dawada oo ana ilaabay ee waa wax aan xiise wayan u ahyan aadna u degay maskaxdayda.
waxay ka bilabataa sidan.
waa baa waxaa jiray Wiil iyo aabihii waxaay ahayeen reer aan xoolo fiican lahayan markaa meeshay deganyeen waxaa xu kumi jiray nin boqoro ah nolo saren ku nool markaa wiilkan oo ah da yar baa aabhii baray habka wax loo xado. waxay ku shaqaysan jireen isaga iyo aabihii meel lagu tumo birha shaqdaa waaxaa u dheeraa Tuugada maxa yeelay xoolo may haysan aan ahay kay dadka ka soo xadan makr maalin tii danbe baa wiilkii aabhii ku yiri aabe waxaan yar yar ee aan xadayna wax inoo noqon maysee aan boqorka magalda qasnadiisa jabsano. taladaas ba la soo jeediyey markaa sidii furaha lagu heli lahaa baa la raacay waxaa furanha qasnada ahay nin u aha bide boqorka oo aan laga qadi karnay furah una xilsaaran muhimada qasanda boqorka (dahabka ) markaa waxa la soo ogaada wiilkii iyo aabhihii ninkan bidaha ahi meeshu arootii ka quruucdo meeshii baala yiri aan tagno waxayan ku balameen wiil kii iyo aabhiin. markaan meesha galo oo aan quraacda cuno baa odaygii yir aan isas suuxinaya oo sika dhigaya sidi wax miyir beelay marka adiga waxaad tirhadaa alaal aabahay baa suuxay ee yaa fure hay aan cidhibka ka gubee. waa khiyamo loo dagay ninka furaha haee markii meeshii la galay oo ay arkeen nin kii baa sidii la sameey odaygii baa isa suuxiyey markaas baa wiil kii qayshay war ii miciin aabahay baa suxaye waa lagu soo uruuray markaas ba la waydiiya oo layiri wiil kii aabahaa marka uu suxuu maxa la siiyaa markaas buu yiri waxba la siiyee Furaha qafilka lagu fur baa inta la kulayliyo cagta cidhibteeda lagag dhejiyaa ee yaa furayaal haya markaa kii cabiidka aha oo dadk meesh joogay ka mid ah ba yiri war ana ahay fure hadii uu wax u qabanayo oadayga suuxay. furihii buu u dhiibay yarkii. yarkii intuu furhii qaday buu dakii makhaaxida soo geliyey oo isago kulu buu abihii cidhibtiisa ku dhejiyey markaas buu booday odaygii intii furha kulu ka taabtayna waxaa caadi isagu sawiray furihii. markaas baa wiilkii nin kii cabiidka ahaa ee furaha u dhiibay buu u ceshay furuhii oo yiri waad mahadsantahay. wiil kii iyo aabhii ilayan waa sheeko laysala ogaaye waa la kacay waxa la aaday meeshii ay biraha ku tumi jiraa waxaa la qaday sawirkii furaha ee odayga cidhibtiisa ka soobaxay waxan laga soo samaytay fure kii oo kale ah kii bidaha boqorku hayay oo kale ah. waxaa la aaday kaasalkii (daartii) boqorka si loo soo dhaco dahabka boqorka waxa laysku beegay goor ahbeen ah markii ay noqtay mugdi baa loo dhacay boqorka gurigiisii waxaan la furay meeshii dahabka ee boqorka markii dahabkii la soo qatay ee lala marayey meel sare oo la rabo in dibada loola dhaco baa wax arkay gaadh haye ku dhow oo ilalinay guriga boqorka korkiisa markaas buu ka soo daba orday wiil kii markuu aarkay ninka soo oraday buu booday odaygiina wuxuu siday dahabka qaybtii markaas buu is yiri dahabka hor tuur adigna ka daba bood markuu dahab kii tuuray oo uu ku dhacay dhulak hoose wiilkiin hoos joogo baa nin kii gaadha ahaa ku soo garay odaygii meeshiii isagoo aan weli boodin wuxnuna odaygii ak gooyo qoorta wiil kii wuxuu hoos ku sugaaye aabihii inuu soo boodo lakiin waxaa ku soo agdhacay aabihii madaxiisii.
Categories: ilaqosol . Tags:cabdi samed baashe . Author: cabdi samed baashe
suugaanta Next Post